ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုး ၅ခု - Hello Sayarwon
ပခုံးဖော်ဝတ်စုံ ရိုးရိုးလေးတစ်စုံ ဝတ်ထားသူတစ်ယောက်ဟာ လေးလက်မအမြင့် ဒေါက်ဖိနပ်စီးလိုက်ရုံနဲ့ နဂိုထက် ဆယ်ဆလောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ ငြင်းဆန်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေကြား အငြင်းအပွားရဆုံး အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးလေ့ရှိသူ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်က ဒီဖိနပ်တွေစီးထားစဉ်မှာ အလွန်နာကျင်ရပေမယ့် ဒီနာကျင်မှုကို ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုး ၅ခုကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က ကျောရိုးမကြီးမှာ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ၊ ပြေးတဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့တုန်ခါမှုတွေကို ထိန်းပေးမယ့် အကွေး ၄နေရာရှိပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ပုံမှန်ထက် ရှေ့ကိုယိုင်သွားပြီး နောက်ကျောကို ပိုပြီးကိုင်းသွားစေပါတယ်။ ဒီကိုယ်နေဟန်ထားကြောင့် ခါးအောက်ပိုင်းကျောရိုးမှာရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ S ပုံသဏ္ဍာန်အကွေးပေါ် တင်းအားအများကြီး သက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနေကုန်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးသူ အမျိုးသမီး အတော်များများဟာ ခါးနာ၊ ခါးတောင့်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓါကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအရ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခြေမအရင်းပိုင်းက ခပ်ဖောင်းဖောင်း ခြေဖဝါးနေရာနဲ့ ခြေဖနောင့်ပေါ် ညီညီမျှမျှ သက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးချိန်ကို ခြေမအရင်းပိုင်းနေရာက စုထမ်းလိုက်ရပြီး မတ်မတ်ရပ်နိုင်ဖို့ ဒူးကိုပါ ရှေ့တွန်းလိုက်သလို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီကိုယ်နေဟန်ထားဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ မူလဖြောင့်တန်းမှုကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒူးဆစ်ကိုပါ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ များစွာသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းတဲ့ပြဿနာ ပိုဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး ဒီပြဿနာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် သင့်ဒူးခေါင်း အနေအထားပျက်တဲ့အခါ တင်ပါးဆုံကပါလိုက်ပြီး အနေအထားပျက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်က သင့်ကို တင်ကော့ရင်ကော့ ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားမျိုး ရစေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လည်ပင်း ဆိုးဆိုးရွားရွားနာကျင်တာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်စီးနေစဉ် ခြေမအရင်းပိုင်းက ထမ်းထားရတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မျှယူဖို့အတွက် သင့်ခါးအောက်ပိုင်းက အနောက်ဘက်ကို ကော့ပေးရပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးသူတွေရဲ့ တင်ပါးဟာ အခြားသူတွေထက် ပိုပြည့်ပြီး လုံးဝိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါလောက် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးပြီး တစ်နေကုန်အပြင်ထွက်မိပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမဆို ခါးနာတဲ့ဝေဒနာကို ပြေးမလွတ်အောင် ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းဟာ သင့်ကို အမှန်တကယ် ကြည့်ကောင်းစေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်တစ်လေ စီးတာက မပြောပလောက်ပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် မချွတ်တမ်းစီးမယ်ဆိုရင်တော့ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ခြေဖဝါးတွေက သင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ။ ပြေးတဲ့အခါ၊ သီချင်းနားထောင်ရင်း ခြေဆောင့်တဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့တုန်ခါမှုတွေကို ကူရှင်တစ်ခုသဖွယ် ထိန်းပေးပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ ခြေမအရင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ ခပ်ဖောင်းဖောင်း ခြေဖဝါးနေရာနဲ့ ခြေချောင်းရိုးလေးတွေက ခန္ဓါကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ဖိအားဒဏ်ကို အဓိကခံကြရပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ ခါး၊ ခြေဖဝါး၊ တင်ပါးဆုံ၊ ဒူးခေါင်းနဲ့ ကျောရိုးတို့ဟာလည်း အနားယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိတဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို အရေးကြီးတဲ့ ပွဲသွားပွဲလာနေ့တွေအတွက် သိမ်းထားပြီး သာမန်ထသွားထလာနဲ့ ရုံးသွားရုံးပြန်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် ဖိနပ်တွေစီးပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Here’s What Really Happens When You Wear High Heels. http://greatist.com/live/high-heels-affect-on-your-body acessed March 18, 2017
What Happens To Your Body When You Wear Heels. http://www.womenshealthmag.com/health/high-heels acessed March 18, 2017